“ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏”—၁ ယောဟန် ၄:၈ | လေ့လာရန်ဆောင်းပါး
ယေဟောဝါကို ဝတ်ပြုဖို့ သင့်သားသမီးကို လေ့ကျင့်ပေးပါ
ယေဟောဝါကို ဝတ်ပြုဖို့ သင့်ဆယ်ကျော်သက်သားသမီးကို လေ့ကျင့်ပေးပါ
ယေဟောဝါဟာ မေတ္တာရှင် ဘုရားသခင်ဖြစ်
သင်ဟာ “လူသားချင်းကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်” သလား
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅
ဖတ်လို ကင်ဘွန်ဒူ ကမ္ဘောဒီးယား ကရင် (စကော) ကီကာအွန်ဒီ ကီကွန်ဂို ကီချူဝါ (ကူဇ်ကို) ကီချူဝါ (အန်ကက်ရှ်) ကီချူဝါ (အိုင်ယာကူချို) ကီစုန်ဂီ ကီလူဘာ ကွန်ဂို ကွမ်ဂါလီ ကွမ်ယာမာ ခိုလ် ချီတွန်ဂါ ချုတ်ဝီ ဂရင်းလန်း ဂါ ဂါရီဖူနာ စင်ရန်ဂျာ စပိန် စီပီဒိုင် စီဘမ်ဘာ ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆီလိုဇီ ဆေးရှဲ ခရီအိုးလ် ဆွာတီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဇူးလူး ညာနက်ကာ တဆောန်ဂါ တလာပနက် တဟီတီ တိုဂျိုလာဘယ်လ် တိုတာနက် တီရှီလူဘာ တွီ ဒန်မီ နာဝါ့တ် (ဂီယာယာရို) နာဝါ့တ် (မြောက်ပိုင်း ပီဘလာ) နာဝါ့တ် (ဟွာစတီကာ) နာဝါ့တ် (အလယ်ပိုင်း) ပစ်ထ်ဂျင် (ကင်မရွန်း) ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဗန်ဒါ မမ် မမ်ဘွေး‑လွန်ဂူ မားဇတက် (ဟွာ့တလာ) မုန် (အဖြူ) မော်ရစ်တရှန် ခရီအိုးလ် မော်လ်တီစ် မြန်မာ ရှိုစာ လင်ဂါလာ လမ်ဘာ လာအိုတရန် လူဗာလီ လွန်ဒါ ဝေယူနာအီကီ အင်ဂါဘာရီ အင်ဇီမာ အင်ဒက်ဘယ်လီ အင်ဒွန်ဂါ အင်္ဂလိပ် အမ်ဘွန်ဒူ အာဖရိက အိုတီတီလာ အီတလီ အီဘန် အေးဝေး
“ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။”—၁ ယော. ၄:၈၊ ၁၆။
သီချင်း– ၁၈၊ ၉၁
ဘုရားသခင့်မေတ္တာက နာခံမှုရှိတဲ့ လူသားတွေရဲ့ အနာဂတ်အပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မလဲ။
အပြစ်သားတွေကို ယေဟောဝါ ဘယ်လိုမေတ္တာပြသလဲ။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်က ကျွန်တော်တို့အပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ်တော့်မေတ္တာကို ဘယ်လိုဖော်ပြသလဲ။
၁။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အဓိကအရည်အသွေးက ဘာလဲ။ အဲဒီအရည်အသွေးကို သိရတဲ့အခါ ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုခံစားရသလဲ။
“ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏” လို့ ကျမ်းစာပြောတယ်။ (၁ ယော. ၄:၈) အဲဒါ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ။ မေတ္တာဟာ ယေဟောဝါရဲ့ အရည်အသွေးအများကြီးထဲက တစ်ခုလောက်သာ မဟုတ်ဘူး။ ယေဟောဝါရဲ့ အဓိကအရည်အသွေးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တော့်မှာ မေတ္တာရှိရုံသာမကဘူး။ ကိုယ်တော်တိုင် မေတ္တာဖြစ်တယ်။ မေတ္တာရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် စကြဝဠာနဲ့ သက်ရှိအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ လုပ်ဆောင်သမျှ မေတ္တာကို အခြေခံတဲ့အတွက် သိပ်ကို ကျေးဇူးတင်စရာပဲ။
၂။ ဘုရားသခင့်မေတ္တာက ဘယ်အချက်ကို အာမခံသလဲ။ (ဆောင်းပါးအစမှာပါတဲ့ ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။)
၂ ယေဟောဝါဟာ မိမိရဲ့ဖန်ဆင်းရာတွေကို ချစ်ခင်ကြင်နာတယ်။ လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ ပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တော့်မေတ္တာက အာမခံတယ်။ ဘုရားကို နာခံသူတွေဟာ စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှု ခံစားရမယ်။ ဥပမာ၊ “ခန့်ထားတော်မူသောသူ” ယေရှုခရစ်အားဖြင့် “လူနေရာမြေကြီးကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အညီ တရားစီရင်မည့်နေ့ရက်ကို” ယေဟောဝါ “သတ်မှတ်” ထားတာဟာ မေတ္တာကြောင့်ပဲ။ (တ. ၁၇:၃၁) အဲဒီနေ့ရက် ရောက်လာမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တယ်။ နာခံမှုရှိတဲ့လူသားတွေဟာ ထာဝစဉ်တည်မြဲမယ့်အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
၃။ ကျွန်တော်တို့ကိုသာ ယေဟောဝါ မချစ်ခဲ့ရင် လူ့အနာဂတ် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။
၃ မေတ္တာသာ ဘုရားသခင့်အဓိကအရည်အသွေး မဟုတ်ခဲ့ရင် လူ့အနာဂတ် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လူတွေဟာ အချင်းချင်းကို ဆက်အုပ်ချုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အပြင် မေတ္တာမဲ့ပြီး ဒေါသကြီးတဲ့ဘုရား စာတန်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက် ဆက်ရှိနေမှာပဲ။ (၂ ကော. ၄:၄; ၁ ယော. ၅:၁၉; ဗျာဒိတ် ၁၂:၉၊ ၁၂ ကိုဖတ်ပါ။) ကျွန်တော်တို့ကိုသာ ယေဟောဝါ မချစ်ခဲ့ရင် အနာဂတ်က မတွေးဝံ့လောက်အောင် ကြောက်စရာကောင်းမှာပဲ။
၄။ မိမိရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကို စာတန်ပုန်ကန်တဲ့အခါ ယေဟောဝါ ဘာကြောင့် ခွင့်ပြုခဲ့သလဲ။
၄ စာတန်ဟာ ဘုရားသခင့်အုပ်ချုပ်မှုကို ပုန်ကန်ပြီး အာဒံနဲ့ ဧဝကိုလည်း ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်ဖို့ သွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ စကြဝဠာ အချုပ်အခြာအာဏာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို စောဒကတက်ခဲ့တယ်။ သူ့အုပ်ချုပ်မှုက ဘုရားသခင့်အုပ်ချုပ်မှုထက် ပိုကောင်းမယ်လို့ အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့တယ်။ (က. ၃:၁-၅) အဲဒီပြောဆိုချက်ကို သက်သေပြဖို့ စာတန်ကို ယေဟောဝါ အချိန်တစ်ခဏ ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသားတွေရော စာတန်ပါ ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်စိုးရှင်တွေ မဖြစ်နိုင်မှန်း လူ့သမိုင်းက သက်သေထူတယ်။
ယေဟောဝါဟာ လူသားတွေကို မိမိရဲ့လမ်းညွှန်မှုမပါဘဲ အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရော အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ပါ မပေးထားပါဘူး
၅။ လူ့သမိုင်းကြောင်းက ဘာကိုသက်သေထူသလဲ။
၅ ဒီနေ့ခေတ် ကမ္ဘာ့အခြေအနေက ဆိုးသည်ထက် ဆိုးလာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၁၀၀ အတွင်းမှာ စစ်ကြောင့် လူသန်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်။ “နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များ” မှာ “ဆိုးညစ်သောသူနှင့် အယောင်ဆောင်သောသူတို့သည် ဆိုးသည်ထက် ဆိုးလာ” လိမ့်မယ်လို့ ကျမ်းစာပြောတယ်။ (၂ တိ. ၃:၁၊ ၁၃) ‘အိုယေဟောဝါ၊ လူသည် မိမိသွားရာလမ်းကို အစိုးမရ။ သွားစဉ်အခါ မိမိခြေရာတို့ကို မစီရင်တတ်သည်ကို အကျွန်ုပ်သိပါ၏’ လို့လည်း ကျမ်းစာပြောတယ်။ (ယေ. ၁၀:၂၃) အဲဒီစကားတွေမှန်တယ်ဆိုတာ သမိုင်းကြောင်းက သက်သေထူတယ်။ ယေဟောဝါဟာ လူသားတွေကို မိမိရဲ့လမ်းညွှန်မှုမပါဘဲ အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရော အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ပါ မပေးထားပါဘူး။
၆။ ဆိုးသွမ်းမှုကို ဘုရားသခင် ဘာကြောင့် ခွင့်ပြုထားသလဲ။
၆ ဆိုးသွမ်းမှုကို တစ်ခဏတာ ဆက်ခွင့်ပြုထားခြင်းအားဖြင့် မိမိအုပ်ချုပ်မှုသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ယေဟောဝါ သက်သေထူခဲ့တယ်။ အနာဂတ်မှာ ဆိုးသွမ်းမှုအားလုံးကို ဘုရားသခင် ဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနောက် မိမိရဲ့မေတ္တာပါအုပ်ချုပ်မှုကို စောဒကတက်သူတိုင်း ချက်ချင်း အရေးယူခံရပါလိမ့်မယ်။ ပုန်ကန်သူတွေကို ချက်ချင်း ဖျက်ဆီးသင့်မှန်း သက်သေထူဖို့ လူ့သမိုင်းကြောင်းကို ဘုရားသခင် ထောက်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဆိုးသွမ်းမှုကို နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှ ခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
၇၊ ၈။ ယေဟောဝါဟာ မေတ္တာကို ဘယ်နည်းတွေနဲ့ ဖော်ပြသလဲ။
၇ ယေဟောဝါဟာ ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကို နည်းလမ်းများစွာနဲ့ ဖော်ပြတယ်။ စကြဝဠာရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ အလှအပအကြောင်း စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ စကြဝဠာမှာ ဂလက်ဆီ သန်းထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိတယ်။ ဂလက်ဆီတစ်ခုစီမှာ ကြယ်နဲ့ဂြိုဟ် သန်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီထဲက ကြယ်တစ်လုံးကတော့ နေဖြစ်တယ်။ နေမရှိဘဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်ရှိတွေ မရှင်သန်နိုင်ဘူး။ အဲဒီဖန်ဆင်းရာအားလုံးက ယေဟောဝါဟာ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်မှန်း သက်သေထူပြီး တန်ခိုး၊ ဉာဏ်ပညာ၊ မေတ္တာစတဲ့ ကိုယ်တော့်အရည်အသွေးတွေကို ဖော်ပြတယ်။ မှန်ပါတယ်၊ “ဖန်ဆင်းထားရာများကို ထောက်ရှုသဖြင့် ထာဝရတန်ခိုးတော်နှင့် ဘုရားသခင့် အဖြစ်တော်တည်းဟူသော မျက်မြင်မရသော ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ရည်တော်များသည် လောကဖန်ဆင်းချိန်မှစ၍ ထင်ရှားစွာ သိမြင်ရ၏။”—ရော. ၁:၂၀။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ယေဟောဝါ ဖန်ဆင်းထားသမျှဟာ လူတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို အကျိုးပြုတယ်
၈ ယေဟောဝါဟာ ကမ္ဘာကို သက်ရှိတွေအတွက် အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသမျှဟာ လူတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို အကျိုးပြုတယ်။ ဘုရားသခင်က လူသားတွေအတွက် လှပတဲ့ဥယျာဉ်စံအိမ်တစ်ခု ပြုလုပ်ပေးတယ်။ ထာဝစဉ်အသက်ရှင်နိုင်စွမ်းရှိစေတဲ့ ပြည့်ဝစုံလင်တဲ့ စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုလည်း ပေးတယ်။ (ဗျာဒိတ် ၄:၁၁ ကိုဖတ်ပါ။) အဲဒီအပြင် ‘ခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာတော် ထာဝစဉ်တည်တဲ့အတွက် သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးကို အစာရေစာ ပေးသနားတယ်။’—ဆာ. ၁၃၆:၂၅၊ ကဘ။
၉။ ယေဟောဝါဟာ မေတ္တာရှင်ဘုရားဖြစ်ပေမဲ့ ဘယ်အရာကို မုန်းသလဲ။
၉ ယေဟောဝါဟာ မေတ္တာရှင်ဘုရားဖြစ်ပေမဲ့ မကောင်းမှုကို မုန်းတယ်။ ဥပမာ၊ ဆာလံ ၅:၄-၆ (ကဘ) မှာ ယေဟောဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပြောတယ်– ‘ကိုယ်တော်ဟာ ဆိုးညစ်မှုကိုနှစ်သက်တဲ့ဘုရား မဟုတ်ဘူး။ ယုတ်မာသူအားလုံးကို ကိုယ်တော်မုန်းတယ်။ အကြမ်းဖက်သူတွေ၊ လှည့်စားတတ်သူတွေကို ရွံမုန်းတယ်။’
၁၀၊ ၁၁။ (က) လူဆိုးတွေ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ (ခ) နာခံမှုရှိသူတွေကို ယေဟောဝါ ဘယ်လိုဆုချမလဲ။
၁၀ ယေဟောဝါဟာ မေတ္တာရှင်ဘုရားဖြစ်ပြီး မကောင်းမှုကို မုန်းတဲ့အတွက် စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကနေ ဆိုးသွမ်းမှုကို သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ ဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။ ကျမ်းစာမှာ အခုလို ကတိပေးထားတယ်– ‘လူယုတ်မာတွေ ပယ်ရှင်းခံရပြီး ယေဟောဝါကိုမျှော်လင့်နေသူတွေကတော့ ကမ္ဘာမြေကို ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ မကြာခင် လူဆိုးတွေ လုံးဝရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။’ ယေဟောဝါရဲ့ရန်သူတွေဟာ ‘မီးခိုးငွေ့လို လွင့်ပြယ်သွားလိမ့်မယ်။’—ဆာ. ၃၇:၉၊ ၁၀၊ ၂၀၊ ကဘ။
၁၁ ‘ဖြောင့်မတ်သူတွေက ကမ္ဘာမြေကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး အဲဒီမှာ ထာဝစဉ်နေထိုင်ရလိမ့်မယ်’ လို့လည်း ကျမ်းစာမှာ ကတိပေးထားတယ်။ (ဆာ. ၃၇:၂၉၊ ကဘ) သစ္စာရှိသူတွေဟာ ‘များပြားလှတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကြောင့် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရလိမ့်မယ်။’ (ဆာ. ၃၇:၁၁၊ ကဘ) အကြောင်းကတော့ မေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်ဟာ သစ္စာရှိကျေးကျွန်တွေရဲ့ အကောင်းဆုံးအကျိုးအတွက် အမြဲလုပ်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်လို့ပဲ။ “ကိုယ်တော်သည် သူတို့၏မျက်စိမှ မျက်ရည်ရှိသမျှကို သုတ်တော်မူမည်။ သေခြင်း ရှိတော့မည်မဟုတ်။ ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းတို့လည်း ရှိတော့မည်မဟုတ်။ ယခင်အရာများသည် ကွယ်ပျောက်လေပြီ” လို့ ကျမ်းစာပြောတယ်။ (ဗျာ. ၂၁:၄) ဘုရားသခင့်မေတ္တာကို တန်ဖိုးထားလေးမြတ်တဲ့ နာခံမှုရှိသူတွေအတွက် သိပ်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ် စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
၁၂။ ‘အပြစ်ပြောစရာမရှိသူ’ က ဘယ်သူလဲ။
၁၂ ‘အပြစ်ပြောစရာမရှိသူကို သတိပြုကြည့်ပါ။ စိတ်ရိုးဖြောင့်သူကို မျက်ခြည်မပြတ်ကြည့်နေပါ။ သူလိုလူရဲ့အနာဂတ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းနေလိမ့်မယ်။ ပြစ်မှားသူတွေကတော့ ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မယ်။ လူဆိုးတွေရဲ့အနာဂတ်က ပျက်စီးရလိမ့်မယ်’ လို့ ကျမ်းစာပြောတယ်။ (ဆာ. ၃၇:၃၇၊ ၃၈၊ ကဘ) ‘အပြစ်ပြောစရာမရှိသူ’ ဟာ ယေဟောဝါနဲ့ သားတော်အကြောင်း သိကျွမ်းအောင်လုပ်ပြီး ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကို နာခံမှုရှိရှိ လုပ်ဆောင်တယ်။ (ယောဟန် ၁၇:၃ ကိုဖတ်ပါ။) ‘လောကနှင့် လောကတပ်မက်ခြင်းတို့သည် ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်ဆဲရှိပြီး ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဆောင်ရွက်သောသူမူကား အစဉ်အမြဲတည်’ တယ်ဆိုတာ သူ အကြွင်းမဲ့ယုံတယ်။ (၁ ယော. ၂:၁၇) ဒီလောကရဲ့အဆုံး နီးနေပြီဖြစ်လို့ “ယေဟောဝါကို မျှော်လင့်ပြီး ကိုယ်တော့်လမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်လျှောက်” ဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။—ဆာ. ၃၇:၃၄၊ ကဘ။
ဘုရားသခင်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး မေတ္တာလုပ်ရပ်
၁၃။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးမေတ္တာလုပ်ရပ်က ဘာလဲ။
၁၃ ကျွန်တော်တို့ဟာ မစုံလင်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ ဘုရားသခင်ကို နာခံနိုင်တယ်။ ယေရှုရဲ့ ရွေးနုတ်ဖိုးကို အခြေခံပြီး ယေဟောဝါနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းလည်း ရရှိနိုင်တယ်။ ရွေးနုတ်ဖိုးဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးမေတ္တာလုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ နာခံမှုရှိတဲ့လူသားတွေ အပြစ်နဲ့သေခြင်းအောက်ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ ရွေးနုတ်ဖိုးကို ယေဟောဝါ ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ (ရောမ ၅:၁၂ နဲ့ ၆:၂၃ တို့ကိုဖတ်ပါ။) ယေရှုဟာ ကောင်းကင်မှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်လျှောက် ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် မြေကြီးပေါ်မှာလည်း သစ္စာရှိမယ်ဆိုတာ ယေဟောဝါ ယုံကြည်စိတ်ချတယ်။ ယေရှုကို လူတွေ ရက်ရက်စက်စက် ဆက်ဆံတဲ့အခါ မေတ္တာရှိဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ယေဟောဝါ အကြီးအကျယ် နာကျင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ယေရှုဟာ ဘုရားသခင့်အုပ်ချုပ်မှုကို သစ္စာရှိရှိ ထောက်ခံခဲ့တယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် စုံလင်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ဟာ အခက်ခဲဆုံးအခြေအနေတွေ ကြုံရချိန်မှာတောင် ဘုရားသခင်အပေါ် သစ္စာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ သက်သေထူခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ မေတ္တာကြောင့် သားတော်ကို စေလွှတ်ခဲ့ (အပိုဒ် ၁၃ ကိုကြည့်ပါ)
၁၄၊ ၁၅။ ယေရှုရဲ့သေခြင်းက လူသားတွေကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲ။
၁၄ ယေရှုဟာ အပြင်းထန်ဆုံး စမ်းသပ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ ဆက်သစ္စာရှိပြီး ယေဟောဝါရဲ့အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထောက်ခံခဲ့တယ်။ ယေရှု အသက်စွန့်ပြီး ရွေးနုတ်ဖိုးပေးခဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့ သိပ်ကျေးဇူးတင်သင့်တယ်။ ရွေးနုတ်ဖိုးကြောင့်သာ ဘုရားသခင့်ကမ္ဘာသစ်မှာ လူသားတွေ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ လမ်းပွင့်လာတယ်။ ရွေးနုတ်ဖိုးအားဖြင့် ယေဟောဝါနဲ့ ယေရှုပြသခဲ့တဲ့ မေတ္တာအကြောင်း တမန်တော်ပေါလု အခုလိုပြောတယ်– “ငါတို့သည် အားနည်းလျက်ရှိနေသေးစဉ် ခရစ်တော်သည် သတ်မှတ်ထားချိန်တွင် ဘုရားတရားမဲ့သူတို့အတွက် အသေခံတော်မူ၏။ ဖြောင့်မတ်သူတစ်ဦးအတွက် အသေခံမည့်သူ ရှိခဲ၏။ သူတော်ကောင်းအတွက်မူ အသေခံဝံ့သူ ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် ငါတို့သည် အပြစ်သားဖြစ်နေသေးစဉ်ပင် ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက် အသေခံတော်မူခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ချစ်တော်မူကြောင်း ပြတော်မူ၏။” (ရော. ၅:၆-၈) တမန်တော်ယောဟန်လည်း အခုလိုရေးတယ်– “ဤနည်းဖြင့် ဘုရား သခင်၏မေတ္တာသည် ငါတို့တွင် ထင်ရှား၏။ အကြောင်းမူကား သားတော်အားဖြင့် ငါတို့အသက်ရရန် ဘုရားသခင်သည် တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီ။ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်သည်ဟုမဆို။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်၍ ငါတို့၏အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်အဖြစ် သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူ၏။”—၁ ယော. ၄:၉၊ ၁၀။
၁၅ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ကြောင်း တင်ပြသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်ဘဲ၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေရန် ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် ဤလောကကို ချစ်တော်မူ၏” လို့ ယေရှုပြောတယ်။ (ယော. ၃:၁၆) ယေဟောဝါဟာ သိပ်ကို နာကျင်ခံစားရပေမဲ့ သားတော်ကို ရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ် ပေးခဲ့တယ်။ ဒီအချက်က လူသားတွေကို ဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ချစ်မှန်း ဖော်ပြတယ်။ ယေဟောဝါရဲ့မေတ္တာဟာ ထာဝစဉ်တည်တယ်။ ပေါလု အခုလိုရေးခဲ့တယ်– “သေခြင်းဖြစ်စေ၊ ရှင်ခြင်းဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရအာဏာဖြစ်စေ၊ မျက်မှောက်အရာဖြစ်စေ၊ နောင်လာမည့်အရာဖြစ်စေ၊ အာဏာတန်ခိုးဖြစ်စေ၊ အမြင့်ဖြစ်စေ၊ အနိမ့်ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်ဖန်ဆင်းခံအရာမျှ ငါတို့၏သခင် ခရစ်တော်ယေရှု၌ရှိသော ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့် ငါတို့ကို မကွာစေနိုင်ဟု ငါယုံကြည်စိတ်ချ၏။”—ရော. ၈:၃၈၊ ၃၉။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော် အခု စိုးစံနေပြီ
၁၆။ မေရှိယနိုင်ငံတော်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘုရင်အဖြစ် ဘယ်သူ့ကို ယေဟောဝါ ခန့်အပ်ထားသလဲ။
၁၆ ဘုရားသခင့်မေတ္တာလုပ်ရပ် နောက်တစ်ခုကတော့ မေရှိယနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ လူသားတွေကိုချစ်ပြီး အုပ်ချုပ်ဖို့အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ယေရှုခရစ်ကို ဘုရင်အဖြစ် ယေဟောဝါခန့်အပ်ထားတယ်။ (သု. ၈:၃၁) အဲဒီအပြင် လူသားတွေထဲကရွေးကောက်ထားတဲ့ ၁၄၄,၀၀၀ လည်း ကောင်းကင်မှာ ယေရှုနဲ့အတူ အုပ်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းကင်ကို သူတို့ ထမြောက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ လူ့ဘဝအတွေ့အကြုံကို လူသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက် အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။ (ဗျာ. ၁၄:၁) ယေရှုမြေကြီးပေါ်ရှိတုန်းက နိုင်ငံတော်အကြောင်း အဓိကဟောပြောခဲ့တယ်။ “ကောင်းကင်ဘုံရှိ ကျွန်ုပ်တို့အဖ၊ ကိုယ်တော်၏နာမတော် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းရှိပါစေ။ နိုင်ငံတော် လာပါစေ။ အလိုတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ပြည့်စုံသကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်၌လည်း ပြည့်စုံပါစေ” လို့ဆုတောင်းဖို့ တပည့်တွေကို သင်ပေးခဲ့တယ်။ (မ. ၆:၉၊ ၁၀) အဲဒီဆုတောင်းချက် ပြည့်စုံလာမယ့်အချိန်၊ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အားဖြင့် လူသားတွေ ကောင်းချီးခံစားရမယ့်အချိန်ကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
၁၇။ ယေရှုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ လူ့အုပ်ချုပ်မှု ကွာခြားပုံကို ရှင်းပြပါ။
၁၇ ယေရှုရဲ့ မေတ္တာပါအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ လူ့အုပ်ချုပ်မှု သိပ်ကို ကွာခြားပါတယ်။ လူ့အုပ်ချုပ်မှုကြောင့် လူသန်းပေါင်းများစွာဟာ စစ်ပွဲတွေမှာ သေဆုံးရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရင် ယေရှုကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို သိပ်ချစ်တယ်။ ယေရှုဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင့်မေတ္တာကို တုပသူဖြစ်တယ်။ (ဗျာ. ၇:၁၀၊ ၁၆၊ ၁၇) “ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ သင်တို့ကို ငါလန်းဆန်းစေမည်။ ငါ့ထမ်းပိုးကို ထမ်း၍ ငါ့ထံမှ သင်ယူကြလော့။ အကြောင်းမူကား ငါသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့၍ စိတ်နှိမ့်ချသောသဘောရှိ၏။ သင်တို့သည် လန်းဆန်းရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ငါ့ထမ်းပိုးသည် ထမ်းလွယ်၏။ ငါ့ဝန်လည်း ပေါ့၏” လို့ ယေရှုပြောတယ်။ (မ. ၁၁:၂၈-၃၀) တကယ့်ကို မေတ္တာပါတဲ့ အာမခံချက်ပါပဲ။
၁၈။ (က) ၁၉၁၄ ကစပြီး ဘာဖြစ်ပျက်နေသလဲ။ (ခ) နောက်ဆောင်းပါးမှာ ဘာအကြောင်း ဆွေးနွေးမလဲ။
၁၈ ၁၉၁၄ ကစပြီး ကောင်းကင်မှာ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော် စိုးစံနေပြီဆိုတာ ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တွေက ဖော်ပြတယ်။ ကောင်းကင်မှာ ယေရှုနဲ့အတူအုပ်ချုပ်မယ့် နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဒီစနစ်ရဲ့အဆုံးကို လွတ်မြောက်ပြီး ကမ္ဘာသစ်ထဲဝင်မယ့် “လူအုပ်ကြီး” ကို အဲဒီအချိန်ကစပြီး စုသိမ်းနေတယ်။ (ဗျာ. ၇:၉၊ ၁၃၊ ၁၄) ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူအုပ်ကြီး ဘယ်လောက်တိုးများနေပြီလဲ။ သူတို့ဆီကနေ ဘုရားသခင် ဘာတောင်းဆိုသလဲ။ အဲဒီမေးခွန်းတွေကို နောက်ဆောင်းပါးမှာ ဆွေးနွေးပါမယ်။
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅